သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ လူနှင့်ဆင် ပဋိပက္ခကြောင့် ၆ လအတွင်း လူ ၅၅ ဦးသေဆုံး - Xinhua News Agency
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံရှိ Colombo-Trincomalee လမ်းမပေါ်တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်းက ဖြတ်သန်းသွားလာနေသော တောရိုင်းဆင်များအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကိုလံဘို ၊ ဇွန် ၁၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအနှံ့ ပြီးခဲ့သော ၆ လအတွင်း လူနှင့်ဆင် ပဋိပက္ခများကြောင့် လူ ၅၅ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဒေသတွင်း မီဒီယာများက ဇွန် ၁၅ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။အဆိုပါ ၆ လတာကာလအတွင်း တောရိုင်းဆင်ကောင်ရေ စုစုပေါင်း ၁၅၈ ကောင် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန(DWC)က ထုတ်ပြန်မှုအရ ယင်းတောရိုင်းဆင် ၁၅၈ ကောင်သည် လျှပ်စစ်ရှော့ခ်အရိုက်ခံရခြင်း ၊ “Hakka Patas”ဟု ခေါ်သော အစာဖြင့် မျှား၍ ပေါက်ကွဲစေနိုင်သော ပစ္စည်းများဖြင့် ထောင်ချောက်ဆင်သတ်ဖြတ်ခြင်း နှင့် သေနတ်ထိမှန် ဒဏ်ရာများကြောင့် သေဆုံးရခြင်းတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်က လူသားများ၏ ပရောဂကြောင့် ဆင်သေဆုံးရမှုသည် အရေအတွက်အများဆုံး ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး စံချိန်တင်ခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် လူနှင့်ဆင် ပဋိပက္ခကြောင့် ဆင်သေဆုံးမှုမှာ ကျဆင်းလာခဲ့ကြောင်း သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေဌာန(DWC)က ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
လူသားများနှင့် ပဋိပက္ခများကြောင့် ဆင်သေဆုံးရသည့် ကမ္ဘာ့ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံ နံပတ် ၁ စာရင်းတွင် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအား ထည့်သွင်း သတ်မှတ်ခဲ့သော ၂၀၁၉ ခုနှစ်က နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ဆင်အကောင်ရေ ၄၀၇ ကောင် သေဆုံးခဲ့ရမှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဆင်သေဆုံးမှုသည် ၃၁၈ ကောင်ထိ လျော့ကျသွားခဲ့ကြောင်း တရားဝင်စာရင်းများအရ သိရသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ဆင်များ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူပေါင်း ၁၁၂ ဦး သေဆုံးခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှစ၍ လူသေဆုံးမှု ၈ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားကြောင်း သိရသည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ တောရိုင်းဆင်များ သတ်ဖြတ်ခြင်းသည် ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ရန်လိုသော ရွာသားများက တောရိုင်းဆင်များအား အဆိပ်ကျွေးခြင်း သို့မဟုတ် ပစ်ခတ်ခြင်းများပြုလုပ်နေသည်မှာ အမြဲလိုလိုရရှိနေသော သတင်းများဖြစ်သည်။
COLOMBO, June 15 (Xinhua) — Fifty-five people were killed across Sri Lanka within the past six months over the human-elephant conflict, local media reported on Tuesday.
According toareport by Sri Lanka’s Department of Wildlife Conservation (DWC), the 158 elephants were killed from electrocution, explosive baits called “Hakka Patas,” and gunshot wounds, among others.
The DWC said earlier this year that the deaths of elephants caused by the human-elephant conflict had declined in 2020 in the country after it recorded the world’s highest number of elephant deaths due to human actions in 2019.
Official statistics showed that 318 elephants were killed in 2020 compared with 407 in 2019, which ranked Sri Lanka as the world’s number one country for elephant deaths due to conflicts with humans.
Official records showed the population of wild elephants in Sri Lanka is estimated at 7,500. Enditem
1.File Photo: Wild elephants cross the elephant pass on Colombo-Trincomalee road of Sri Lanka, April 4, 2016. (Xinhua/Gayan Sameera)